မြင်းခြံစည်းရိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကဘာလဲ? - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » မြင်းခြံစည်းရိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကဘာလဲ?
views:1 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-29 မူလ:ဆိုက်ကို
နှစ်တွေမြင်းခြံစည်းရိုးလယ်သမား '' ကျက်စားရာအရပ်အတူလိုက်ပါကြောင်းရှည်လျားလမ်းများနှင့်အတူရှည်လျားသောသမိုင်းရှိသည်။ ရှေ့ဦးစွာ မှစ. လယ်သမားများမြင်းခြံစည်းရိုးအဖြစ်အသုံးပြုရန်တုတ်ကောက်ယူနှင့်ယခုသူတို့အစွမ်းထက်ပြီးလှပခြံစည်းရိုးမွေးစားပါပြီ။ ဤသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်ကြာမြင့်စွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာတိုးတက်မှုအဖြစ်လယ်သမားများပိုကောင်းမြင်းခြံစည်းရိုးမှီအောင်လိုက်လော့။ လယ်သမားများနှင့်တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပတျဝနျးကငျြကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရန်လိုအပ်နေသည်။ သစ်သားတုတ်များထိုကဲ့သို့သောဆိတ်, သိုးများနှင့်အခြားသေးငယ်တိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်သေးငယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုငျသျောလညျး, ထိုကဲ့သို့သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်မြင်းများအဖြစ်ကြီးမားသောသတ္တဝါများကိုအားကောင်းမြင်းခြံစည်းရိုးလိုအပ်သည်။
19 ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတော့ဆူးဝါယာကြိုးတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့တိရိစ္ဆာန်ပူးတွဲ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အဖြေတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်သားကောင်တွေကိုဆဲမြင်းခြံစည်းရိုးကိုဖြတ်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်ခြံစည်းရိုးအောက်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင့် 1883 အတွက်ကျယ်ပြန့်မိုးခေါင်မှလယ်သမားများကပိုပြီးခက်ခဲသူတို့ရဲ့မွေးမြူရေးဘို့ရေနှင့်အစားအစာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကအဆင်မပြေမှုမှဦးဆောင်နှင့်အချို့သောတောင်သူလယ်သမားများအပူတပြင်းအစီအမံရှာ၏။ အဆိုပါရွှေ့ပြောင်းအစုအစုမြင်းခြံစည်းရိုးပိတ်ဆို့နှင့် rancher သူတို့သိုးနွားသူတို့ကိုမှတဆင့်ရေရဖို့ကိုကူညီမြင်းခြံစည်းရိုးကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အစပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါလယ်သမားလည်းကပ်လျက်ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အစိုးရပြည်ခြံစည်းရိုးဖြတ်တောက်နှင့်မူရင်းလမ်းကြောင်းမှတဆင့်သူတို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်နယ်စပ်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လယ်ကွင်းအချို့မီးရှို့ပစ်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လယ်သမားများအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့မွေးမြူရေးဂရုစိုက်ပါပွီ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဒီဟာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လယ်သမားဟာသူတို့ရဲ့မွေးမြူရေးများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာစေရန်အလားအလာဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေချင်တယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ရေး၏အခြားနည်းလမ်းများမှသာ paddock အတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုနေရာချ, ဒါပေမယ့်သားကောင်တွေကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိထိရောက်သောကာကွယ်ရေးရှိကတည်းကဆူးဝါယာကြိုးနေဆဲလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အပြည့်အဝလယ်သမားများ၏အမိန့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုငျသညျ။
ကနဦး Non-လျှပ်စစ်မြင်းခြံစည်းရိုးကျက်စားရာအဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစားသူကအရပျမှလူပျောက်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားဝါယာကြိုးကွက်သေစေနိုင်သောတပ်ဖွဲ့များမှအလင်းဖိအားကနေရေစီးကြောင်းသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအကျဉ်းထောင်, အစိုးရအဆောက်အဦးများနှင့်အခြားဒေသများရှိအဖြစ်စစ်ပွဲများ, ချွေးတပ်စခန်း, ဗုံးအမိုးအကာနှင့်အခြားစစ်ရေးဒေသများရှိကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ထိုအခါမူကားလူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မြက်မြင်းခြံစည်းရိုးဖန်တီးဤအသုံးပြုမှုထံမှချေး။ ဤသည်ကိုထိထိရောက်ရောက်မွေးမြူရေးခြိမ်းခြောက်ထံမှကျူးကျော်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်လယ်သမားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးသည်။
ယနေ့သတ္တုမြင်းခြံစည်းရိုးများနှင့်ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုးအထူးသဖြင့်, အသုံးများကြသည်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသူတို့ကအလွယ်တကူ, corroded အရောင်နဲ့စတိုင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနှင့်တပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပို. ပို. လယ်သမားများနှင့်စျေးကွက်ကမျက်နှာသာပေးကြသည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား, အဆိုပါခြံစည်းရိုးကိုအမြဲဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဗီနိုင်းနှင့်အတူမြင်းခြံစည်းရိုးသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မွေးမြူရေးခြံများအတွက်အလုံခြုံဆုံး, အလှဆုံးနဲ့အဆင်ပြေအတွေ့အကြုံကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုအထူးပြုတဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာတပ်ဆင်ထားကြသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်အမိန့်မှကြိုဆိုကြသည်။
မြင်းခြံစည်းရိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကို မြင်းခြံစည်းရိုးဖှံ့ဖွိုးတိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် မြင်းခြံစည်းရိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြင်းခြံစည်းရိုး